Zimbabwe court lifts ban on acclaimed documentary film | Regator
Zimbabwe's High Court has lifted a ban on an acclaimed documentary film that portrays former president Robert Mugabe in a far from flattering light.The film,The Democrats, by Danish filmmaker Camilla Nielsson, was made in the aftermath of Zimbabwe’s violent and disputed 2008 elections.
As Xi Jinping visited Zimbabwe during a tour of Africa in 2015, Robert Mugabe offered the Chinese president a warm welcome and portrayed the two nations as deep allies. “China is Zimbabwe’s all-weather friend,” the Zimbabwean presid...
HARARE (Reuters) - Zimbabwe's High Court told the government on Friday to let the largest diamond-mining firm in its Marange fields return to its mines and take control of its assets there, defying President Robert Mugabe who said a...
"Democrats/Soft Vengeance" (PBS, Monday). Danish director Camilla Nielsson ("Cities on Speed: Mumbai Disconnected," "Children of Darfur" and "Good Morning Afghanistan") turned her attention to Zimbabwe in this 2014 film, which comes...
Zimbabwean Documentary Democrats Makes Politics Mesmerizing
Access is often the lifeblood of the political documentary. Case in point: Danish director Camilla Nielsson’s Democrats, shot in Zimbabwe over the course of three years, follows the efforts of two men on opposing sides of the politi...